တစ်စုံတစ်ဦးက သင့် အကြောင်း တွေးနေပြီဆိုရင် ကြုံရမယ့် ထူးခြားတဲ့ နမိတ်များ… - KSM Global
တစ်စုံ တစ်ယောက် က သင့် အကြောင်း တွေးနေ တာကို သိနိုင်မယ် ထင်လား? သိရော သိချင်လား? ခုပြောပြမယ့် အချက်တွေက သင့်အကြောင်းကို တစ်ယောက်ယောက်ကေ တွးနေတဲ့အခါ သင့်မှာ ခံစားနေရမယ့် လက္ခဏာတွေဖြစ်ပါတယ်။
သင့်အကြောင်း တွေးတယ် ဆိုတာမှာ သင့်ကို ချစ်လို့ဖြစ်စေ မုန်းလို့ဖြစ်စေ တွေးနေနိုင် ပါတယ်။ တကယ်လို့သင့်ကို ရန်ပြုဖို့ထိတွေးနေ တယ်ဆိုရင် ဒီအချက်လေးတွေ ကိုသိထားတော့ သင်သတိထားနိုင်တာပေါ့.
ကဲ..ဘယ်လိုတွေခံစားရမလဲ ဘာတွေလဲ ဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင်..
ဒီယုံကြည်မှု ကတော့ အာရှနိုင်ငံတွေ မှာ အမြစ်တွယ်နေတဲ့ ယုံကြည်မှုလေးပါနော်..တစ်စုံ တစ်ဦးက သင့်အကြောင်းတွေးနေတဲ့ အခါ သင့်နှာခေါင်းဟာ ယားယံစပြုလာပြီး မကြာခင် ထပ်ခါထပ်ခါနှာချေမှု ကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်တဲ့။
ဒါကနေမကောင်းတဲ့ အချိန်အတွက်တော့ အကျုံးမဝင်ပါဘူးနော်။ အအေးပတ်တာလည်း မရှိ နှာခေါင်းယားယံလောက်အောင် ရှုရှိုက် စရာလည်း မရှိပဲ အသားလွတ်ကြီး နှာတွေထချနေရင်တော့ တစ်စုံတစ်ဦးရဲ့ အတွေးဗဟိုမှာသင်ရောက်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်။
သူတို့ ဘာကိုတွေးနေလဲဆိုတာ ထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင် ၂ ခါနှာချေတာဟာ တစ်စုံ တစ်ဦးက သင့်မကောင်းကြောင်းပြောနေပြီ ဆိုတာပါပဲ။ ၃ ခါနဲ့အထက် နှာချေတာကတော့ သင့်ကောင်းကြောင်းတွေ ကိုတွေးနေတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။
ဒါမှမဟုတ် တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ကိလွမ်းနေပြီး သင့်ကို ချစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဲ့ဒီလူက ဘယ်သူလဲဆိုတာကို ခန့်မှန်းတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုလည်းပြောပြဦးမယ်နော်..
ရိုးရာအစဉ်အလာနည်းလေး အရဆို သင့်ဘေးက လူတစ်ယောက်ယောက်ကို သူကြိုက်တဲ့ ဏန်း ၃ လုံးပါတဲ့ နံပါတ်တစ်ခု ကိုပေးဖို့ပြောပါ။
ဒါကို အခြေခံထားပြီး တွက်ချက်ရင် သင့်အကြောင်းကိုတွေးနေ တဲ့သူကို ခန့်မှန်းလို့ရနိုင်ပါတယ်တဲ့..
ဘယ်လို တွက်ချက်မလဲဆိုတော့ သင့်ကို ၂၊ ၃၊ ၁ ဆိုတဲ့ဂဏန်း ၃ လုံးကို ပေးထားတယ် ဆိုပါတော့။ အဲ့ဒါတွေကိုပေါင်းကြည့်ပါ။ ၂+၃+၁=၆ ရတယ်။
အက္ခရာစဉ် အရဆို ၆ က “စ”မလား? ဆိုလိုတာက သင့်ကိုစဉ်းစားနေသူရဲ့နာမည်က “စ” လုံးနဲ့စတဲ့ သူတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ် တဲ့.စည်သူတို့ စိုးသူတို့ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့..
နား သို့မဟုတ် ပါးမှာ မီးနဲ့တို့ခံရသလို ပူလောင်လာမယ်
ရိုက်ပုတ်မှု ရဲ့နောက်ဆက်တွဲကို မြင်ယောင်ကြည့်ပါ၊ ပူခနဲဖြစ်သွား သလိုပေါ့၊ တစ်စုံတစ်ဦး ကသင့်ကို စဉ်းစားနေပြီး မကောင်းကြောင်း ဆိုးဆိုးဝါးဝါးပြောနေပြီဆိုရင် အဲ့ဒီလိုခံစားချက်ဖြစ်လာပါတယ်။
သင့်ကိုစကားလုံးတွေ နဲ့ရိုက်နှက်နေသလိုပေါ့။ ဒီခံစားမှုက သင့်ရဲ့ပါးနဲ့နားက ရှက်လို့မျက်နှာ ရဲသွားတာမျိုး မဟုတ်ဘူးနော်။ တစ်ခါတစ်ရံ တော်တော်ကြီးကို သိသိသာသာနီရဲနေတာမျိုးဖြစ်တာပါ?
တစ်ကယ်လို့ သင့်နားနဲ့ မျက်နှာက ပူလောင်တာမျိုး မဟုတ်ပဲ နွေးထွေးမှုကို ခံစားရရင်တော့ တ စ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ကေင်းကြောင်းတွေ ကိုပြောနေပြီး သင့်ကိုချစ်ကြိုက်သလိုခံစားနေရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ကြို့ထိုးခြင်းဟာ စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ထမင်းစားပြီးတဲ့ အခါမှာ သူတို့ကိုရလေ့ရှိတယ်၊ ဒါပေမဲ့တချို့ယုံ ကြည်မှုတွေအရ ကြို့ထို့ခြင်းဟာ သင့်အကြောင်း စဉ်းစားနေသူတစ် ဦး ရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် သက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
ကံမကောင်းစွာနဲ့ တစ်စုံတစ် ဦး ကသင့်ကို မကောင်းတဲ့ စကားကိုပြောခြင်းသို့ မဟုတ်သင်နှင့် ပတ်သက်ပြီး တိုင်ကြားခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်သူတွေ ဘာစဉ်းစားနေတာကိုသင်ပြောနိုင်မဘ့်နည်းလမ်းလည်းရှိပါတယ်။
လူတချို့အနားရောက်မှ သင်ကြို့ထိုးချင်လာတယ် ထိုးလိုက်တယ်။ ဒါက ဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ ဒီလူတွေဟာ သင့်ကိုထိ ခိုက်နစ်နာအောင်တွေးနေတယ် ပြောခဲ့တယ်ဆိုတာပါပဲ။ ယခုသင်သူတို့ကို ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်နိုင်သည် သို့မဟုတ် သင်ကြို က်သလို မေးမြန်းကြည့်လို့ရပြီ။
ကြို့ထိုးခြင်းအတွက်ကောက်ချက် မချခင်အခြားဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ အကြောင်းတရားတွေကိုတော့ သင် ဖယ်ရှားပစ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
အာရုံကြော – ယားယံရောဂါများရှိခြင်း
သင့်အိပ်မက်ထဲတွင် တစ်စုံတစ်ကို၊ အထူးသဖြင့်ကြာမြင့်စွာမတွေ့ရသေးသောတစ်စုံ တစ်ဦးကို တွေ့မြင်ပါကသူတို့ဟာ သင့်အကြောင်းကိုစဉ်းစားနေနိုင်ပါတယ်။
သင်နှင့်ပတ်သက်သောသူတွေရဲ့ အတွေးတွေက သင်အိပ်မက်မက်ဖို့အတွက် ရုပ် ပုံလွှာတွေကို ထုတ်လွှင့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အိပ်မက်တစ်ခုက သင့်ကိုအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေတော့မပေးနိုင်ပါဘူး။
အိမ်မက်အရတော့ သူတို့သင့်ကောင်းကြောင်းကိုတွေးလား ဆိုးကြောင်းကိုတွေးလဲဆိုတာတော့ ယတိပြတ်မပြောနိုင်ပါဘူး။ အိမ်မက်တွေက ဆန်းကြယ်ကြပါတယ်။
သင့်အတွေးတွေကနေတစ်ဆင့်လည်း အိမ်မက်တွေကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့အတွက် သင်စွဲလမ်းမှုမရှိပဲမက်တဲ့အိမ်မက်ကသာလျင် သူတို့ သင့်ကိုသတိရနေတယ် သင့်အကြောင်းတွေတွေးနေတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မရှင်းပြနိုင်တဲ့ ထိတွေ့မှုကို ခံစားရမယ်
တစ်ယောက်ယောက် သင့်ကိုလာ ထိလိုက်သလို ရုတ်တရက် ခံစားဖူးပါသလား? ဒါဟာကျိန်းသေပေါက် တစ်စုံတစ် ယောက်က သင်နဲ့ပက်သက်ပြီး စိုးရိမ်ပူပန်စိတ်ဖြစ်နေပြီး ဆန်းကြယ်တဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေခံစားနေရတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။
တစ်ကယ်လို့ သင့်ကိုတ စ်စုံတစ်ယောက်က အလွန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်စ ဉ်းစားတွေးတောနေရင် သူတို့ရဲ့ခံစားမှုက သင့်ကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဆက်အသွယ်နဲ့ဆင်တူတဲ့ မက်ဆေ့တစ်ခုခုပို့ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒါကတယ်လီဖုန်း ဆက်သွယ်သလို ပုံစံမျိုးလိုဖြစ်ပြီး သင့်ကိုလာထိ လိုက်သလိုတောင်ခံ စားစေရတာပါ။
ဒီအတွေးတွေဟာ ကောင်းလားဆိုးလား သေချာပေါက်ပြောလို့တော့မရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သင့်ကိုလာထိသလို ခံစားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ထိတွေ့မှုလို ခံစားရရင် ဒါက သင့်ချစ်ရသူ ဒါမှဟုတ်
သင့်ကိုခံစားချက်ရှိနေသူတစ်ဦးထံကဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပဲ ထိတွေ့မှုဟာ ညှိုးငယ်ကြောက်ရွံသလို ခံစားရရင် ဒါက သင့်ကို စိတ်ဆိုးနေသူ သို့မဟုတ် သင့်ကြောင့် ဝမ်းနည်းနေရသူတစ်ဦးဦးထံက ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
သင်က ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ငြိမ်ငြိမ်သက်သက် စားသောက်နေတယ်၊ ဂရုစိုက်ပြီးစားသောက်နေတုန်း မှာတောင် အစာတွေကိုစားရတာ ချောချောမွေ့မွေ့မဝင်သွားဘူး၊
မျိုချရတာခက်ခဲတယ်လို့ ရုတ်တရက်ခံစားရမယ်၊ ချောင်းဆိုးချင်သလိုဖြစ်လာမ ယ်၊ ခန္ဓာကိုယ် တုန်လှုပ်သွားမယ် ဆိုရင် တစ်ခုခုတော့မှားနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဆိုသင့်ဘေးပတ်လည်မှာ သင်နဲ့ပက်သက်ပြီး စိတ်တင်းမာနေတဲ့လူတစ်ယောက်ယောက်ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ပဲ ဘယ်သူမှ မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ထဲမှာ
သင့်အကြောင်းတွေပြေးလွှားယောက်ယက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။ အဝေးကြီးဖြစ်နေရင်တောင်အဲ့ဒီတွေးတောမှုနဲ့တင်းမာမှုတွေကို သင့်ရဲ့မသိစိတ်ကတစ်ဆင့်ခံစားနေရတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
မျက်ခမ်းလှုပ်တာတို့ မျက်လုံးယားယံတာတို့နဲ့ပက်သက်ပြီး အယူသီးတဲ့ယုံကြည်မှုတွေရှိကြပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုခံစားရရင် တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ကိုစိတ်ထဲမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။
အမျိုးသားတွေမှာ ညာဘက် မျက်လုံးယားယံခြင်းနဲ့လှုပ်ခတ်ခြင်းတို့က တစ်ယောက်ယောက်က သင့်ကောင်းကြောင်းကိုတွေးနေပြီး ဘယ်ဘက်ဆိုရင်တော့အဆိုးတွေကိုတွေးနေတယ်လို့ ညွှန်ပြနေပါတယ်။
အမျိုးသားတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေကတော့ ပြောင်းပြန်လို့နားလည်ပေးပါနော်။ တစ်ကယ်လို့ ဒါဟာ ဓါတ်မတည့်လို့ မျက်စိပြဿနာရှိလို့ ဖြစ်နေတာဆိုရင် ဒါတွေကို လျစ်လျူရှုနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှု အစားအစာ မောပန်းမှုနဲ့ အခြားအချက်တွေ မျက်စိကို တုန်ယင်စေနိုင်တာတော့ သတိပြုပေါ့နော်။
အပေါ်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ နိမိတ်လက္ခဏာတွေဟာ သင့်အကြောင်းတစ်ယောက်ယောက် စဉ်းစားနေတယ် ဆိုတာ သိနိုင်တဲ့အရာတွေပါ။ ဒါတွေကို တချို့တွေက ယုံကြည်ချင်မှ ယုံကြည်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါတွေကိုအရေးမပါလို့ သင့်စိတ်ထဲကဖယ်ထုတ်ထားမယ်ဆိုလည်း ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အတွေးတွေဟာ လောက မှာ အင်အား အကြီးဆုံးပါပဲ။ ပြောရမယ်ဆိုရင်စိတ်ပေါ့။ သင့်မှာ အထက်ကဖော်ပြခဲ့သလိုထူးဆန်းတဲ့ ခံစားမှုတွေခံစားရမယ် ပေါ်လာမယ်ဆို အပေါ်ကအချက်တွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ချင့်ချိန်နိုင်ပါတယ်နော်..